Bit By Bit - Kubvunza mibvunzo - 3.5 New nzira kubvunza mibvunzo
Kuongororwa kwetsika kwakavharwa, kunotyisa, uye kubviswa muupenyu. Iye zvino tinogona kubvunza mibvunzo yakawanda yakazaruka, inonakidza, uye yakawedzera muhupenyu.
Zvose kuongororwa kukanganisa sangano kunokurudzira vatsvakurudzi kuti vafunge nezvekutsvaga tsvakurudzo sezvikamu zviviri-chikamu chekuita: kuunganidza vanhu vanobvunza uye kuvabvunza mibvunzo. Muchitsauko 3.4, ndakakurukura kuti inguva ye digalog inoshandura sei isu tinoshanyira vanhu vakapindura, uye ikozvino ini ndichakurukura kuti zvinoita sei vatsvakurudzi kubvunza mibvunzo nenzira itsva. Aya maitiro matsva anogona kushandiswa pamwe nematauriro emuenzaniso kana kuti zvisingaiti.
Kuongororwa nzira ndiyo nzvimbo iyo mibvunzo inobvunzwa, uye inogona kuva nemigumisiro inokosha pakuyera (Couper 2011) . Munguva yekutanga yekutsvakurudza kwekutsvakurudza, nzira yakajairika yakawanda yakanga iri chiso nechiso, asi munguva yechipiri, yakanga iri foni. Vamwe vanotsvakurudza vanoona nguva yechitatu yekutsvaga tsvakurudzo sekungowedzera kwekuongorora maitiro ekuisa makombiyuta uye foni. Zvisinei, iyo yeramende yakawanda inopfuura kungoshanduka mumapombi kuburikidza nemibvunzo nemhinduro zvinopera. Pane kudaro, kuchinja kubva kune analogog kusvika kudijita kunobatsira-uye zvichida kunoda-vatsvakurudzi kuchinja maonero atinoita mibvunzo.
Chidzidzo chaMichael Schober uye vashandi pamwe chete navo (2015) chinoratidza kubatsira kwekugadzirisa nzira dzepamutemo dzekutarisana nemafambisirwo emakambani ekutaurirana-age. Muchidzidzo ichi, Schober uye vashandi vake vakaenzanisa nzira dzakasiyana dzekubvunza vanhu mibvunzo kuburikidza nefoni. Vaienzanisa kuunganidza dhidhi kuburikidza nekutaurirana kwezwi, iyo ingadai yakave shanduro yepanyama yemagariro echipiri, yekuunganidza dhidhiyo kuburikidza ne microsurvei yakawanda inotumirwa kuburikidza nemeseji yemishumo, nzira isati yave yakajeka. Vakaona kuti microsurveys yakatumirwa kuburikidza nemeseji yakatumira kune dhepamusoro-dhu kupfuura dhiyabvunzurudzo yezwi. Mune mamwe mazwi, kungoendesa kune imwe yekare kupinda mune zvinyorwa zvitsva hazvina kutungamirira kune data yakakwirira kwazvo. Pane kudaro, nekufungisisa zvakajeka pamusoro pehutano uye maitiro ehutano akakomberedza mafoni, Schober nevamwe vaaishanda vakakwanisa kuvaka nzira iri nani yokubvunza mibvunzo inotungamirira kumhinduro dzakakwirira-yepamusoro.
Kune zvakawanda zvakaenzana izvo vatsvakurudzi vanogona kuisa maitiro ekuongorora mafomu, asi ndinofunga kuti chinonyanya kukosha chinonzi digital-age ongororo maitiro ndeyekuti vane makombiyuta-anotarisirwa , panzvimbo yekubvunzurudza-anotungamirirwa (sekunhare nekutarisana-ne-chiso chekuongorora) . Kutora bvunzurudzo dzevanhu kunze kwekutora deta kunopa zvikomborero zvakakura uye zvinotanga zvimwe zvinetso. Mukutaura kwezvibatsiro, kubvisa vanhu vekubvunzurudza kunogona kuderedza hutano hwevanhu hunodiwa , tsika yevakabvunzwa kuti vaedze kuzviratidza ivo nenzira yakanakisisa kuburikidza, somuenzaniso, pasi pekupa ruzivo rwekuita zvakaipa (semuenzaniso, kushandiswa kwezvinodhaka zvisina kushandiswa kwezvinodhaka) uye pamusoro pekupa ruzivo rwakakurudzirwa maitiro (semuenzaniso, kuvhota) (Kreuter, Presser, and Tourangeau 2008) . Kubvisa vabvunzurudzo vevanhu kunogonawo kubvisa migumisiro yevabvunzurudzo , mutsika wezvingapinduriro kuve nekufuridzirwa nenzira dzisinganzwisisiki nemaitiro evanhu vanobvunza mubvunzo (West and Blom 2016) . Mukuwedzera kune zvingangodaro kuvandudza kunyatsotarisa kune mamwe marudzi emibvunzo, kubvisa vanobvunzurudza vevanhu kunowedzera kuderedza mari-nguva yekubvunzurudza ndeimwe yezvinodhura zvinowanikwa muongororo yekuongorora-uye inowedzera kushanduka kwepamusoro nokuti vapindura vanogona kutora chikamu chero pavanenge vachida, kwete chete apo mubvunzi aripo . Zvisinei, kubvisa mubvunzurudzo wevanhu kunogadzirawo mamwe matambudziko. Kunyanya, vabvunzurudza vanogona kukudziridza hukama nevatauriri vanogona kuwedzerwa maitiro ekubatana, kujekesa mibvunzo yekuvhiringidza, uye kuchengetedza kubatanidzwa kwevanopindura pavanenge vachitaura nemibvunzo yakareba (inogona kunge inotyisa) (Garbarski, Schaeffer, and Dykema 2016) . Nokudaro, kuchinja kubva kumubvunzurudzo-inotarisirwa kuongororwa maitiro kune kombiyuta-inotungamirirwa inogadzira mikana yose nematambudziko.
Zvadaro, ndicharondedzera nzira mbiri dzinoratidza kuti vatsvakurudzi vangashandisa sei zvishandiso zvezera rekugadzirira kubvunza mibvunzo yakasiyana: kuenzanisa zvinyorwa zvemukati pane imwe nguva yakakodzera uye nzvimbo kuburikidza nehupenyu hwemazuva ekuongorora (chikamu 3.5.1) nekubatanidza simba yemibvunzo yekuongorora yakavharidzirwa uye yakavharidzirwa kuburikidza neongororo yevhiki (chikamu 3.5.2). Zvisinei, kuenderera kumakombiyuta-anotarisirwa, kuwanzobvunza kunorevawo kuti tinoda kugadzira nzira dzekukumbira izvo zvinonakidza kune vatori vechikamu, imwe nzira dzimwe nguva inonzi gamification (chikamu 3.5.3).